Traditional Healing – The Ulwazi Programme
Kuyini kahle kahle ubungoma?
Ukukapalata yisifo esiphatha abantwana uma besaqhumisa abathakathi (amazinyo). Kunenkolelo yokuthi akufanele abizwe ngamazinyo ngoba kungaqhubeleka phambili ukufa. Kufana noma umntwana enesifo senyongo nayo inyongo kuthiwa imbi noma umthakathi ukuze ukufa kungaqhubekeli phambili. Lesisifo siyelapheka kodwa kuyehluka ngokwabantu, lapha sizobheka imithi enjengomgwava nomsilimbuzi. Umntwana ugxotshelwa amahlamvu ale mithi kuhlanganiswe namanzi achathwe ngayo. Lemithi ifike isishubise isisu, … Read more
Ukufika kwengane entsha ekhaya kusho ukushintsha kwempilo kubazali bayo Kanye nabo bonke abantu emndenini ngoba kuthatha wonke umuntu ukuze ukukhula kwayo kube yimpumelelo. Nokuthi uma kuyingane yokuqala kulowomzali usuke esadinga ukuthi afundiswe futhi aboniswe ngezindlela ezilandelwayo uma ingane ikhula noma igula. Lapha sizobheka izifo eziyamaniswa kakhulu nengane esencane. Mhlawumbe kubalulekile ukuthi siveze nokuthi lokuvikelwa kwengane … Read more
Ziningi izinkolelo ezikhona ngesihlahla somdlebe esitholakala ezwenikazi laseAfrika kuphela, eNingizimu Afrika lesihlahla sasitholakala endaweni yaseNgwavuma nasesifundazweni saseLimpopo. Lesi yisihlahla esesatshwa kakhulu ngoba bekwaziwa ukthi siyingxenye yezihlahla eziphila ngegazi labantu nelezilwane. Izinkolelo ngaso ngezokuthi amazimuzimu ayehlobene noma ayehlangene ngandlela thize nalesihlahla kanye nokuthi lesihlahla asizwani nobisi lomuntu osawumdlezane kangangoba kuthiwa siyavala uma kukhona umdlezana eduze kwaso. … Read more
Categories Environment Tags Izindaba, Stories, Traditional Healing, Ukwelapha ngesintu
Uma uyinyanga noma uyisangoma, kuba nezinto ozilandelayo, uma kade kukhona umuntu oshonile emndenini noma esihlobeni, uyayivalela imithi ungayisebenzisi kuze kube uyageza wena nomgonqo wakho (uyazila) kuze kudlule umfihlo noma umngcwabo. Uma sekufihliwe kuyima ugeza ngendlela eqondene nomsebenzi lowo owenzayo. Kufanele kugezwe ngomswani nenyongo yembuzi ngumnini wesigodlo. Lokhu wenzela ukususa ithunzi lokushonelwa, ukuze ukwazi ukuqhubeka usebenze. … Read more
Ukuthakathwa Ngezilwane Zasendle
Imithi namakhambi adume ukusetshenziswa ukusiza abantu ekuqineni noma ekulashweni esifweni esithize ababhekene naso. Kodwa kuvame ukuthi abantu bagcine sebeganga ngalamakhambi abawaphiwe ukuthi balaphe ngawo benze okunye okuwukonakala nomkhuba ongcolile ocekela phansi abanye abantu nemizi yabo. Lesi senzo sokucekela phansi ngokonakala ngamakhambi kubizwa ngokuthi ukuthakatha. Lapha umuntu usuke enomona ngenxa yento ethize lona omunye angenayo noma … Read more
Categories Culture Tags Izindaba, Stories, Traditional Healing, Ukwelapha ngesintu